Cephalosporins ट्याब्लेटको: सूची। 5th गर्न 1st देखि cephalosporins सबै पुस्ताका एक विवरण
अत्यधिक प्रभावकारी एन्टिबायोटिक को एक समूह - यो cephalosporins। तिनीहरूले 20 औं शताब्दीको बीचमा अझै पनि पत्ता, तर हाल को वर्ष मा नयाँ उत्पादनहरु को धेरै पाए। त्यहाँ पहिले नै एन्टिबायोटिक पाँच पुस्तामा छन्। सबै भन्दा साधारण cephalosporins ट्याब्लेटको। तिनीहरूले धेरै संक्रमण विरुद्ध एकदम प्रभावकारी र राम्रो पनि जवान छोराछोरीलाई द्वारा सहन छन्। तिनीहरूलाई आराम लिनुहोस्, र अक्सर संक्रामक रोगहरु को उपचार मा आफ्नो चुनिएको डाक्टर छ।
एन्टिबायोटिक को यो समूह को ऐतिहासिक विकास
पनि 20 औं शताब्दीमा इटालियन वैज्ञानिक Broads को 40S मा typhoid पत्ता च्याउ जीवाणुरोधी गतिविधि possessing अध्ययन गर्दा। उहाँले दुवै ग्राम-सकारात्मक र ग्राम-नकारात्मक जीवाणुहरु विरुद्ध प्रभावकारी साबित भयो। cephalosporin सी भनिन्छ यसको आधारमा यो च्याउ पदार्थ देखि छुट्टयाएर पछि वैज्ञानिक सिर्जना antibacterials cephalosporin समूहमा संयुक्त। तिनीहरूले penicillins गर्न प्रतिरोधी थिए र रोगनाशक ओषधि अप्रभावी थियो जहाँ अवस्थामा लागू गर्न थाले। यो समूहको पहिलो दबाइ "tsefaloridinom" थियो।
अब पाँच 50 भन्दा बढी लागूपदार्थ एकजुट, cephalosporins को पुस्तामा छन्। फंगल स्थापित र अर्ध-कृत्रिम एजेन्ट थप स्थिर र कार्य को एक व्यापक स्पेक्ट्रम छ जो आधारित थप तयारी।
यी एन्टिबायोटिक कसरी?
Cephalosporin जीवाणुरोधी प्रभाव जीवाणुहरु को सेल झिल्ली को आधार गठन गर्ने इन्जाइमहरु नष्ट गर्न आफ्नो क्षमता मा आधारित छ। त्यसकारण, तिनीहरूले मात्र सूक्ष्मजीवहरु को बढ्दै र प्रजनन विरुद्ध सक्रिय छन्। पहिलो दुई पुस्ताका तयारी staphylococcal र प्रभावकारी थिए गलसुआशोथ संक्रमण, तर ग्राम-नकारात्मक जीवाणुहरु द्वारा उत्पादित बिटा-lactamases नाश छ। यस च्याउ बाट निकाले मुख्य सक्रिय पदार्थ, कृत्रिम पदार्थ गर्न श्रेय थियो जसमा लागूऔषधको हाल पुस्तामा, अधिक स्थिर थिए। तिनीहरूले धेरै संक्रमण प्रयोग, तर stafilokkok र streptococci विरुद्ध अप्रभावी साबित छन्।
cephalosporins को वर्गीकरण
तपाईं विभिन्न मापदण्ड अनुसार समूह मा यी लागूपदार्थ विभाजन गर्न सक्छौं: कार्य, प्रभावकारिता, वा प्रशासन को मोड को स्पेक्ट्रम मा। तर आफ्नो पुस्ताका सबैभन्दा सामान्य वर्गीकरण:
- पहिलो पुस्ता एन्टिबायोटिक 20 शताब्दीको 60 मा प्राप्त गरेका थिए। यो "cephalexin", "Cefazolin", "cefadroxil" र अरूलाई। अब तिनीहरूले धेरै प्रकारका र जारी को analogues छ: इंजेक्शन, पाटी, दाना वा निलंबन को रूप मा;
- एन्टिबायोटिक को दोस्रो पुस्ता बिटा-lactamase थप प्रतिरोधी छ। Cephalosporins अक्सर यस्तो चक्की, "Cefuroxime axetil" र "Cefaclor" प्रयोग गरिन्छ;
- तेस्रो पुस्ता, "ceftibuten" "Cefixime", "cefotaxime" र अरूलाई छन्;
- चौथो पुस्ता जस्तै मात्र इंजेक्शन छन्। तिनीहरूले बिटा-lactamases गर्न पहिले नै प्रतिरोधी हो र विरुद्ध गतिविधि एक व्यापक स्पेक्ट्रम छ ग्राम-सकारात्मक जीवाणुहरु। यो "Tsefipim" र "सेफपिरम";
- भर्खरै cephalosporins5पुस्तामा पाए। ट्याब्लेटको तिनीहरूले पनि अझै जारी छैन, तर यी लागूऔषधको इंजेक्शन धेरै संक्रमण विरुद्ध अत्यधिक प्रभावकारी हुन मानिन्छ।
यी औषधिहरू एकदम प्रभावकारी छन्, तर सबै सूक्ष्मजीवहरु आफ्नो प्रभाव गर्न susceptible। Cephalosporins enterococci, pneumococci, Listeria, Pseudomonas, Chlamydia र म्यकोप्लास्मा विरुद्ध बेकारी हुन सक्छ। तर तिनीहरूले यी रोगहरु उपचार गर्न सजिलो हो:
- cystitis, pyelonephritis, urethritis र अन्तस्करणले अन्य संक्रमण;
- Strep घाँटी;
- संक्रामक माथिल्लो श्वसन पर्चा रोग;
- otitis मिडिया;
- तीव्र र क्रोनिक ब्रोंकाइटिस;
तिनीहरूले postoperative संक्रमण को रोकथाम लागि प्रभावकारी छन्।
यी लागूऔषधको साइड इफेक्ट
Cephalosporins ट्याब्लेटको एकदम सजिलै सहन, तर कहिले काँही पेट दुखाइ, वाकवाकी, उल्टी र पखाला हुन सक्छ। जब इंजेक्शन तयारी भएको इंजेक्शन साइट मा बलिरहेको र भडकाऊ प्रतिक्रिया प्रयोग गर्न सक्छ। सामान्यतया cephalosporins पनि जवान छोराछोरीलाई द्वारा विषाक्त कम र राम्रो सहन छन्। सबै antibacterials जस्तै तिनीहरूले एलर्जी प्रतिक्रिया, जिगर र अन्तस्करणले को विकारहरु पैदा गर्न सक्छ। यो रगत चित्र परिवर्तन गर्न सम्भव पनि छ। सामान्यतया, parenteral cephalosporin उपचार एक चिकित्सा सुविधा मा एक डाक्टर को पर्यवेक्षण अन्तर्गत सञ्चालन गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा गम्भीर साइड इफेक्ट बचा गर्न सकिन्छ। एउटै outpatient उपचार, पाटी cephalosporins प्रयोग गरिन्छ जो मा, यो कडाई निर्देशनहरू पालन गर्न र dysbiosis को रोकथाम लागि थप लागूपदार्थ लिन आवश्यक छ। यी औषधिहरू चिकित्सकको निर्धारण बिना स्वतन्त्र प्रयोग गर्न सकिँदैन किन छ।
किन थप सामान्यतः ट्याब्लेटको cephalosporins प्रयोग गरिन्छ
मूल्य यस मुद्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। सबै पछि, तपाईं चिकित्सा कर्मियों सेवाहरूको लागि भुक्तानी गर्न, थप सीरिंज र समाधान किन्न आवश्यक छैन। प्रति उपचार को पाठ्यक्रम ट्याब्लेटको 50 250 गर्न rubles देखि खरिद गर्न सकिन्छ, छ र अधिक महंगा निलम्बन - 500 बारेमा।
धेरै महत्त्वपूर्ण पनि मनोवैज्ञानिक प्रभाव छ। धेरै विरामीहरु, विशेष गरी छोराछोरी, को इंजेक्शन को तथ्यलाई धेरै संवेदनशील छन्।
जब इंजेक्शन स्थानीय भडकाऊ प्रतिक्रिया सम्भव छ। त्यो किन थप र प्राय क्रमिक उपचार विधि बिरामीको अवस्था सुधार मा प्रशासन को मौखिक मार्ग स्विच गर्दा चिकित्सा प्रयोग छ। यो बाल व्यवहार मा विशेष उपयोगी छ। र बच्चाहरु को उपचार को लागि सामान्य मा एन्टिबायोटिक ट्याब्लेटको मा cephalosporins छन् प्रयोग गर्छन। यो भन्दा थोरै संक्रमण को उपचार मा जायज छ। तर कुनै पनि मामला मा यो एक डाक्टर को सल्लाह भर गर्न आवश्यक छ। यदि त्यो, यो मामला मा मद्दत गर्छ एक cephalosporin मात्र एक विशेषज्ञ निर्धारण गर्न सक्नुहुन्छ।
प्रयोगको लागि निर्देशन
ट्याब्लेट वा जारी जुन दाना, यी एन्टिबायोटिक कडाई चिकित्सकको सल्लाह मा मादक पदार्थ सेवन गर्नुपर्छ।
सामान्यतया दबाइ को 1 ग्राम हरेक 6-12 घण्टा एक वयस्क नियुक्त। एउटै औषधिको खुराक को बच्चाहरु वजन अनुसार गणना र दिइएको चिकित्सा एक दिन भन्दा बढी तीन पटक छैन। एक सुखद स्वाद छ कि एक Dividing पट्टी संग dosing उत्पादन पाटी, र syrups र निलंबन को सुविधाको लागि। यस फारममा छोराछोरीको उपचार को लागि सबै भन्दा अधिक प्रयोग cephalosporins। मात्र3महिना भन्दा साना शिशुहरू यी औषधिहरू प्रयोग नगर्नुहोस्। अक्सर, उपचार पाठ्यक्रम 7-10 दिन रहन्छ, तर यो बिरामीको अवस्था मा निर्भर गर्दछ। सामान्यतया, सुधार पछि आवश्यक 2-3 दिन को लागि दबाइ लिइरहेको जारी छ। यो राम्रो अवशोषित cephalosporin ट्याब्लेटको छ, खानाको पछि दबाइ पिउन भन्दा राम्रो छ। निर्देशन पनि एकै समयमा तिनीहरूले dysbiosis विरुद्ध antifungals र लागूपदार्थ लिन आवश्यक छ कि यस्तो चेतावनी दिन्छ।
पहिलो तीन पुस्ताका Cephalosporins
यो अध्ययन गरेको छ लामो औषधीको प्रयोग र वितरण गरेको छ। विभिन्न प्रकारका तिनीहरूलाई थुप्रै अवस्थित:
- इंजेक्शन लागि समाधान को लागि पाउडर;
- यो पाउडर एक slurry तयार;
- सक्रिय संघटक विभिन्न खुराक युक्त ट्याब्लेट;
- बच्चाहरु को लागि सिरप।
यी सबै लागूपदार्थ अक्सर माथिल्लो श्वसन पर्चा को नम्र संक्रमण, मूत्र, छाला र नरम तन्तु को उपचार को लागि निर्धारित छन्। यी एन्टिबायोटिक तेस्रो पुस्ता पहिलो देखि ग्राम-नकारात्मक जीवाणुहरु विरुद्ध वृद्धि गतिविधि अवलोकन छ, तर ग्राम-सकारात्मक जीवाणुहरु तिनीहरूलाई थप प्रतिरोधी हो। औषधि जसको नाम स्पष्ट आफ्नो सम्बन्धन समावेश "Biodroksil" Kefleks "," Palitreks "," Sefrou "र" Soleksin। "Cephalosporin 2nd पुस्ता ट्याब्लेटको अक्सर आफ्नो उच्च देखि प्रयोग गरिन्छ संकेत बाहेक यी एन्टिबायोटिक पहिलो पुस्ता, दक्षता राम्रो tolerability यस्तो "Zinnat", "Supraks", "Aksosef" Zinoksimor "र" Tseklor "को रूपमा सबै भन्दा राम्रो-ज्ञात लागूपदार्थ संयुक्त।। अपेक्षाकृत हालै एन्टिबायोटिक-cephalosporins ट्याब्लेटको 3rd पुस्ता उत्पादन गर्न थाले। तिनीहरूले यस्तो नाम अन्तर्गत पाउन सकिन्छ: "Oreloks", "Tsedeks" र अरूलाई। यो भन्दा आफ्नो अक्सर प्रयोग भएको थियो बाल व्यवहार मा।
को 4th र 5th पुस्तामा सम्बन्धी यो समूहको एन्टिबायोटिक, अपेक्षाकृत हालै देखा पर्नुभयो। तिनीहरूले अर्द्ध-कृत्रिम एन्टिबायोटिक र कार्य को एक व्यापक स्पेक्ट्रम छ।
जबकि यी औषधिहरू मात्र इंजेक्शन द्वारा प्रयोग गरिन्छ, तिनीहरूले सबै भन्दा राम्रो काम कसरी छ। वैज्ञानिकहरूले cephalosporins को ट्याब्लेटको रूपमा चाँडै गतिविधि गुमाउने बिना अवशोषित सुनिश्चित गर्न असमर्थ छौं। "Maxipime" "Cefepime," "Izodepom", "चङ्गा", "Ladef", "Movizar" र अरूलाई: यस्तो लागूऔषधको चौथो पुस्ता अक्सर प्रयोग गरिन्छ। सबै गम्भीर संक्रमण को उपचार को लागि एक अस्पतालमा प्रयोग गरिन्छ। "Tseftozolan" र "ceftobiprole Medokaril" - भर्खर त्यहाँ एन्टिबायोटिक र 5th पुस्ता गरिएको छ। तिनीहरूले पनि अधिक जानिन्छ सूक्ष्मजीवहरु को बहुमत विरुद्ध प्रभावकारी थिए।
"Metiluratsil" मोमबत्ती। निर्देशन
ठुलो "Ximelin" को लागि उपाय: प्रयोगका लागि निर्देशन
दबाइ 'Papazol': प्रयोगको लागि सङ्केत गर्छ
औषधि "Altan" (ट्याब्लेट): प्रयोगको लागि निर्देशन वास्तविक
"Nexavar": मूल्य, समकक्षों। सस्ता रूपमा "Nexavar" किन्न
प्रवेश हल, मचान-शैली: डिजाइन फर्नीचर र फोटो विशेषताहरु
को शुरुवात देखि अन्तिम गर्न: हर्कुलेसक्लस्टर को Labours को
सुझाव: सबै भन्दा विवाह फूलगुच्छा कसरी बनाउने
"अनाज" - सेन्ट पीटर्सबर्ग, ठेगाना, समीक्षा, फोटो मा रेस्टुरा
व्लादिवोस्तोकको नि: शुल्क पोर्ट: यसको के हो? व्लादिवोस्तोकको नि: शुल्क पोर्ट: प्रविधि र विपक्ष
ताल नाइस, इटाली। ताल नाइस - फोटो। ताल नाइस - यात्री समीक्षा
मामला फर्नीचर - यो छ ... मामला फर्नीचर को उत्पादन
दबाइ "Selank": डाक्टर को समीक्षा, प्रयोगको लागि निर्देशन
कान को सुनिंनु। otitis
ऊन को आवेदन: बच्चाहरु संग काम को लागि उपयोगी सुझावहरू
Triclosan - यो के हो? साबुन, पेस्ट र क्रीम मा triclosan को प्रभाव